EX - ABSDF: မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်း လေ့လာချက်၊ အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ ကိုလိုနီခေတ် (၁၈၈၆-၁၉၄၁) နှောင်းပိုင်းကာလ အမျိုးသားရေး လုပ်ဆောင်ချက်များ ☆
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်း လေ့လာချက်၊ အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ ကိုလိုနီခေတ် (၁၈၈၆-၁၉၄၁) နှောင်းပိုင်းကာလ အမျိုးသားရေး လုပ်ဆောင်ချက်များ ☆
Ko Myoe's photo.
၂၀၁၄ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့သည် ၆၇ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ ဖြစ်ပါသည်။ အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများမှာ -
ကိုလိုနီခေတ် (၁၈၈၆-၁၉၄၁) နှောင်းပိုင်းကာလဖြစ်သော ညွန့်ပေါင်းအစိုးရလက်ထက်(၁၉၃၇-၁၉၄၁) တွင်(၁၉ ဇူလိုင် ၁၉၄၇ ၌ကျဆုံးခဲ့ကြသည့်) အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ အမျိုးသားရေးလုပ်ဆောင်ချက်များကို ပြန်ပြောင်းလေ့လာကြည့် ပါက စိတ်ဝင်စားဖွယ် တွေ့ရှိရပါသည်။
၁၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၁၅ တွင် နတ်မောက်မြို့၌ ဖွားမြင်ခဲ့သော သခင်အောင်ဆန်းသည် ငယ်စဉ်က နတ်မောက်မြို့ဆရာတော် ဦးသောဘိတကျောင်းတွင် ပညာသင်ယူခဲ့ပြီး ၁၉၂၈ ခုနှစ် အသက် ၁၃ နှစ် အရွယ်တွင် ရေနံ ချောင်းမြို့ အမျိုးသားအထက်တန်းကျောင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ပညာသင်ယူခဲ့ပါသည်။ ၁၉၃၂ ခုနှစ်တွင် ယင်းကျောင်းမှ ဆယ်တန်းအောင်မြင်ပြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ခဲ့၏။၁၉၃၅ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အမှုဆောင် အဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ ထိုစဉ် အိုးဝေမဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ရရာ Hell Hound at Large ဆောင်းပါးရေးသူအမည်ကို ထုတ်ဖော်မပေးမှုဖြင့် ကျောင်းထုတ်ခံခဲ့ရ၏။
၁၉၃၆-၃၇ ခုနှစ်များအတွင်း ကိုအောင်ဆန်းသည် တကသဒုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၃၇ ခုနှစ်တွင်ပင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ၀ိဇ္ဇာစာမေးပွဲကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာစာပေ၊ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ၊ ဥရောပရာဇ၀င် ဘာသာရပ်များဖြင့် ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့၏။ ၂၅ ဧပြီ ၁၉၃၈ တွင် ကိုအောင်ဆန်းအား ဗကသဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တင်မြှောက်ခဲ့ကြသည်။သို့သော် မကြာမီ ကိုအောင်ဆန်းဗကသမှ နုတ်ထွက်ကာ တို့ဗမာအစည်းအရုံး၌ သခင်အောင်ဆန်းအဖြစ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဖြစ်လာပါသည်။ ၁၃၀၀ ပြည့် အရေးတော်ပုံအတွင်း သခင်အောင်ဆန်းသည် တက်ကြွစွာ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ ၉ ဇန်န၀ါရီ ၁၉၃၉ တွင် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ တောင်သူလယ်သမားအစည်းအရုံးကို ဖွဲ့စည်းသောအခါ သခင်အောင်ဆန်းသည် အမှုဆောင်တစ်ဦးအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့၏။
★ မန်းဘခိုင် ဟင်္သာတမြို့ ယုန်သလင်းရွာ၌ ၂၆ အောက်တိုဘာ ၁၉၀၃ တွင် သူကြီးမန်းပေကုန်း ဒေါ်ပုတို့က ဖွားမြင်ခဲ့သူ မန်းဘခိုင်သည် ငယ်စဉ်က ဟင်္သာတ အေဘီအမ် ကျောင်းတွင် ပညာဆည်းပူးခဲ့သည်။၁၉၂၀ တွင် ၇ တန်းအောင် ပြီး ဘားမားရိုင်ဖယ်တပ်သို့ ၀င်သည်။ သို့သော် မိဘများသဘောမတူ၍ နုတ်ထွက်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ အေစကော့ကုမ္ပဏီ၌ အလုပ်လုပ်သည်။ ၁၉၂၆ တွင် မန်နေဂျာနှင့် သဘောမတိုက်ဆိုင်သဖြင့် အလုပ်မှထွက်ပြီး ဇာတိရွာသို့ပြန်ကာ ကလေးများအတွက် ကျောင်းဖွင့်ပေးခဲ့သည်။
မိုင်းပွန်စော်ဘွား ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ၊မိုင်းပွန်မြို့၌ စော်ဘွားကြီး စ၀်ခွန်ထီး၊နန်းစိန်ဥတို့က ၃၀ မေ ၁၉၀၇ တွင် ဖွားမြင်ခဲ့သူ စ၀်စံထွန်း၏ ငယ်မည်မှာ စ၀်သာထွန်း ဖြစ်သည်။ငယ်စဉ်က တရားမစာရေးကြီး ဦးစံဖေထံ အခြေခံပညာ သင်ယူခဲ့ပြီး တောင်ကြီးမြို့ စော်ဘွားသားများကျောင်းမှ ဒသမဆင့် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ မိတ္ထီလာမြို့ စက်ရှင်တရားသူကြီး ဦးကျောက်တိုင်ရုံး၌ ၆ လ အလုပ်သင်လုပ်ခဲ့ပြီး မန္တလေးဆပ်ကျောင်းလည်း တက်ရောက်ခဲ့၏။ယင်းနောက် ဗန်းမော်တွင် အလုပ်သင်ဝန်ထောက်အဖြစ် ၆ လအမှုထမ်းခဲ့သည်။ထိုမှတစ်ဖန် တောင်ကြီးမြို့ ရှမ်းပြည်(နယ်)မင်းကြီးရုံးတွင် ခေတ္တအလုပ်ဝင်ရောက်စဉ် ၂၇ ဇွန် ၁၉၂၈ တွင် စော်ဘွားအရာ ဆက်ခံရရှိခဲ့သည်။မိုင်းပွန်စော်ဘွားသည် ရှမ်းပြည်နယ်တစ်ခွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်၏။
မိတ္ထိလာမြို့၌ တိုက်ပိုင်အင်စပက်တော် မစ္စတာ အေရာမန်နှင့် ဒေါ်ငြိမ်းလှတို့က ၂၀ ဇန်န၀ါရီ ၁၈၉၈ တွင် ဖွားမြင်ခဲ့သူ ဦးရာဇတ်မှာငယ်စဉ်က မန္တလေးမြို့ ၀က်စလီယန် မိန်းကလေးကျောင်း၊ယောက်ျားလေးကျေုာင်းတို့ ၌ ပညာဆည်းပူးခဲ့သူဖြစ်သည်။အဌမတန်းတွင် ပညာထူးချွန်သဖြင့် ကျောင်းအုပ်ကြီးက တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ကျော်တင်ပေးခဲ့ရာ ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ ယင်းနောက် ရန်ကုန်ကောလိပ်သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ၀ိဇ္ဇာတန်း၌ အင်္ဂလိပ်စာဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့၏။
မင်းဘူးမြို့၌ ၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၁၃ တွင် မစ္စတာ အိပ်ခ်ျဒဗလျူတရပ်ဝိန်းနှင့် ဒေါ်ရွှေမြင့်တို့က ဖွားမြင်ခဲ့သူ ဦးအုန်းမောင် ၁၉၃၄ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ၀ိဇ္ဇာတန်းအောင်မြင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။၁၉၃၉ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က မန္တ လေးမြို့ အရှေ့နယ်ပိုင်ဝန်ထောက်အဖြစ် အမှုထမ်းနေကြောင်း သိရှိရ၏။
ကျမ်းကိုး၁။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းအတွဲ၈၊ ၉၊ ၁၁၂။အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ် စာစောင်၃။မြန်မာလူကျော်၁၀၀(မောင်ဇေယျာ)
အမျိုးသားအကျိုးစီးပွား တိုးတက်​ဖို့ဆိုရင် (၁)
Min Thant Syn createdadoc. တိုင်းပြည်ကောင်းအောင် ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ တိုင်းပြည်ကောင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလို့ ဆွေးနွေးကြတဲ့...